DAAWO SAWIRO:- Qeybti sadaxaad Maxaabis laga keenay Liibiya oo soo gaaray Muqdisho – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDAAWO SAWIRO:- Qeybti sadaxaad Maxaabis laga keenay Liibiya oo soo gaaray Muqdisho
DAAWO SAWIRO:- Qeybti sadaxaad Maxaabis laga keenay Liibiya oo soo gaaray Muqdisho
Hiiraan Xog, Mar 14, 2018:- Maxaabiis Soomaaliyed oo laga keenay dalka liibiya ayaa laga soo dajiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Maxaabiistaan ayaa tiradooda waxa ay gaareysaa illaa 13 dhalinyaro ah oo doortay in dalkooda hooyo dib loogu soo celiyo, iyadoo tiro kale oo dhalinyaro ah iska diideen in dalkooda lagu soo celiyo.
Masuuliyiin ka tirsan dowladda Federalka Soomaaliya ayaa dhalinyaradan waxa ay ku soo dhaweeyeen Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Dhalinyaradan ayaa waxaa laga soo daayay xabsiyada Tajora iyo Sika ee dalka liibiya, inkastoo ay jiraan dhalinyaro kale oo fara badan, kuwaasi oo xabsiyada wali ku jira.
Waa qeybntii Saddexaad ee laga soo daayay dalka Liibiya,waxaana la filayaa in lagu soo dayo maxaabiis kale oo ku jirta xabsiyada dalka Liibiya.
DAAWO SAWIRO:-Madaxweynaha maamulka Jubbaland oo ku booriyay Dhalinyarada dadaallada ay ka wadaan Kismaayo
Professor caan ahaa oo Geeriyooday